mardi, 17 mai 2022 22:23
Vaonalaroy Randrianarisoa : Nosamborina noho ny fampiasana seky tsy misy anto-bola
Nosamborin’ny Zandary tany an-tranony, androany Talata 17 may 2022 maraina, Rtoa Vaonalaroy Randrianarisoa, Minisitry ny Kolotsaina sy ny Vakoka ary ny Asa Tanana tao amin’ny Governemanta Kolo Roger, ary efa Solombavambahoaka voafidy tao Brickaville. Nividy fanaka mitentina 23 tapitrisa Ariary tamina orinasa iray izy. Nolavin’ny banky anefa ny seky nomeny ilay tranombarotra. Nametraka fitarainana teny amin’ny Zandary, Sampana heloka be Vava, eny Fiadianana, ilay tranombarotra ny 22 martsa 2022. Androany ihany dia natolotra ny Fampanoavana ny raharaha.
Niakatra tao Ankilizato tampon-tanàna ny valala ny alahady 15 mey 2022. Manao antso avo amin'ny fitondram-panjakana, indrindra ny ministera voakasika, ny solombavambahoaka Razafindrazalia Yvonne, voafidy tao Mahabo, Faritra Menabe, manoloana izany, fa mijaly ny vahoaka amin'ny fambolena vary.
mardi, 03 mai 2022 08:45
Antsiranana : Nilahatra mandrakalina vatsim-pianarana ireo mpianatra
Taorian'ny fanaovan'ny PAOMA digitalisation dia omaly alina no efa niari-tory teto anoloan'ny Paositra ny mpianatra milahatra ny vatsim-pianarana izay omena androany talata 03 mai 2021. Hatreto tsy mandeha ilay e-poketra nampanantenaina hanamora sy hanamarinana izay mpianatra tokony hisitraka ny vatsim-pianarana 30 000ar - 40 000ar isam-bolana, ka dia ny kara-panondro no entina hakana ny vola ao amin'ny Paositra. Teo aloha moa dia ny Ministeran'ny Fampianarana ambony no mandefa ny vola any amin'ireo Oniversité, izay izy ireo no miandraikitra ny fitsinjarana izany vatsim-pianarana izany. Ankehitriny, dia ny ministeran'ny vola no mandray ny torimariky ny Ministeran'ny fampianarana, dia ny ministeran'ny vola no mandefa izany mivatana amin'ny Paoma, izay mitsinjara izany amin'ireo mpianatra. (Jereo Sary Tohiny)
Toliara : Nanao fanadiovana faobe taorian'ny rivodoza JASMINE
Nanatanteraka fanadiovana faobe ny teto an-tampony tanànan'i Toliara, androany Alatsinainy 2 May. Nitarika izany ny Minisitra TINOKA Roberto, izay Minisitra mpiahy ny Faritanin'i Toliara sy ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny aty an-toerana. Haharitra telo andro ny fanadiovana, ary olona miisa 1 000 no nirotsaka an-tsitrapo naneho firaisankina ho fanatsarana ny tanànan'i Toliara vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Jasmine. Nandray anjara mavitrika amin'izany ireo mpikambana ao amin'ny antoko TGV, nifanome tanana amin'ny asa fanadiovana. (Jereo Sary Tohiny)
vendredi, 29 avril 2022 16:43
Sary : MDN
Analakely : Basy sy bala tsy ara-dalàna an'arivony nopotehina ampahibemaso
Fitaovam-piadiana 1 089 sy bala miisa 40 no nopotehina am-pahibemaso androany maraina teo amin'ny tokontany malalaky ny Lapan'ny Tanàna Analakely. Ireo fitaovam-piadiana ireo dia azo tamin'ny fanentanana nataon'ireo tompon'andraikitra nandritra ny iray volan'ny famotsoran-keloka amin'ny fitazomana basy tsy ara-dalàna. Nanotrona ny fotoana androany ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny jeneraly RAKOTONIRINA Richard, ny Minisitry ny Fitsarana, ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena ary ny Solotenan'ny Vondrona Afrikana, Ramatoa HAWA Ahmed Youssouf avy amin’ny Vondrona Afrikana, ary ny avy ao amin'ny Vondrona Eropeana. (Jereo Sary Tohiny)
jeudi, 28 avril 2022 13:32
Tafika Anabakabaka : Mankalaza ny faha-61 taonany
Escadrille Malagasy na ESCAMA no anarany tany ampiadohana. Fampitaovana avy amin’ny Tafika frantsay no isany niaingany tamin’izany. Eny Arivonimamo no misy ny Tobin’ny Tafika Anabakabaka ankehitriny.Nisy hetsika samihafa natao teny an-toerana androany nenti-manamarika izao faha-61 taonan’ny Tafika Anabakabaka izao.
jeudi, 28 avril 2022 07:49
RN6 : Avia 'zay mahasaky, zahay paré
Antsohihy - Ambanja Lombolombon'ny lombo. (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 27 avril 2022 14:24
Rivodoza JASMINE : Namono olona 3 teto Toliara
Namela takaitra teto Toliara ny fandalovan'ny rivodoza JASMINE. Maro ireo rava trano sy tafotrano noho ny rivotra mahery. Araka ny tatitra vonjimaika avy ao amin'ny CPGRC dia olona 3 no maty, 6 naratra, maherin'ny 100 ny tafotrano simba sy ravan'ny rivodoza, ary olona miisa 152 no tsy manan-kialofana, ka napetraka ao amin'ny Kianja mitafo Tsenengea. Niara-nisalahy ny tompon'andraikim-panjakana rehetra sy ny Kaominina Ambonivohitr'i Toliara amin'ny fanalana ireo hazo tapaka sy nianjera ary ny fikarakarana ireo traboina.
mercredi, 27 avril 2022 11:17
Ady Ukraine - Russie : Notapahan'i Gazprom ny famatsiana gaz any Pologne sy Bulgarie
Efa nampilaza ny Rosianina fa izay tsy mandoa vidin'ny Gaz amin'ny vola rosianina, Rouble, dia tsy ahazo famatsiana Gaz avy aminy. Tsy nihemotra arak'izany ny Gazprom, orinasa rosianina mpamokatra gaz, fa dia notapahany ny famatsiana ho an'i Pologne sy Bulgarie samy firenena ao anaty Vondrona Eoropeanina. Pologne rahateo, mandray anjara mavitrika amin'ny fanomezana lalana ho an'ny Amerikanina ampiditra basy sy fitaovam-piadiana ho an'i Ukraine.